मेरो घर | Nagarik News - Nepal Republic Media
कक्षा –२, अक्षरा स्कुल, काँडाघारी, काठमाडौं ।
मेरो घर हरियो रंगको छ । मेरो घरमा एउटा बुक रयाक छ । बुक रयाकमा बुकहरू छ । बु्क रयाकको नाम हार्दिक पुस्तक कर्नर हो । यो नाम मेरो बाबाले राख्नुभएको हो ।
त्यहाँ नेपाली र अंग्रेजी बुक छ । नेपाली धेरै छ । अग्रेजीचाहिं थोरैथोरै छ । नेपाली धेरै छ । किनकि हामी नेपाली हो । हामी अमेरिकन होइनौं । नेपालीले धेरै नेपाली पढ्नुपर्छ । अंग्रेजी धेरै पढ्नु पर्दैन । नेपालीले नेपाली त शुद्ध बोल्नुपर्छ । नेपालीले शुद्ध बोलेन भने नेपाली नै भएन । अमेरिकन भइगो नि ।
हाम्रो नेपालमा कति रेकर्ड हुन्छ । राइटिङ रेकर्ड हुन्छ । सिङगिङ रेकर्ड हुन्छ । हामी अचानक अमेरिका गयौं भने यो रेकर्ड मान्छेले बिर्सन्छन् । हाम्रो आफन्तले समेत बिर्सन्छ । आफ्नो छोराले सुद्ध बिर्सन्छ । आफ्नो मामुले सुद्ध बिर्सन्छ । बिरसियो भने नेपाल फेरि आउँदा तिमी को हो भनेर ढोका लाइहाल्छन् नि ।
घरको अर्काे कुरा पनि छ । अर्काे कुरा मेरो घरमा सानो बगैचा छ । त्यो बगैचामा फूल छ । मकै छ । अम्बा छ । किम्बु छ । आलु छ । मुला छ । साग छ । मुन्टा छ ।
मेरो घरमा अरू चिजचाहिं दस परिवार बस्नुहुन्छ । परिवारमा बुबा, मामु, बाबा, दिदी, ठूलो बाबा, ठूलो ममी हुनुुहुन्छ ।
मेरो घरमा चार तला छ । पहिलो तलामा भाडामा मान्छे भाडामा बस्छन् । दोस्रो तलामा लिभिङ रुम, मेरो दिदीको रुम, बुबाको रुम, मेरो रुम छ । मेरो रुममा बुक रयाक छ । पिगी व्याग छ । अलिअलि खेलौना छ । एउटा लुगा राख्ने भाँडा छ । दराज पनि छ । बेड पनि छ । फ्यान पनि छ । डेसिङ टेबल पनि छ । फोटो फ्रेम पनि छ । एउटा फ्रेममा मेरो एक्लै फोटो छ । अर्काे फ्रेममा बाबा र ममीको फोटो छ । बाबा र ममीको बेहुलाबेहुली भको फोटो छ । मलाई दुइटै फोटो मनपर्छ । किनकि फोटोमा र मेरो मामुबाबा हुनुहुन्छ ।
मेरो लिभिङ रूपमा शोभा र बाबाको अवार्डस छ । मेरो टोइज छ । टिभी पनि छ तर त्यो टिभी बिग्रेको छ । टिभी बिग्रेर मैंले टिभी तल बसेर हेर्न पाइन । टिभी हेर्न ठूलो मामुको कोठामा पनि टिभी छ । म टिभी हेर्न ठूलोमामुको कोठामा जान्छु । टिभी बनाउँदा पनि बन्दैन होला । ममीले एकचोटि बनाउन कोसिस गरेको तर बनेन । टिभीको डिस प्ले गयो होला । नयाँ टिभी कहाँबाट किन्नु लकडाउनमा ?
मेरो घरको सेभ प्लेस मेरो रुम हो । अनसेफ प्लेसचाहिं भरयाङ हो । बाथरुम नि हो । छत पनि अनसेफ ठाउँ हो । किचन पनि अनसेफ प्लेस हो । डाइनिङ सेफ प्लेस हो ।
अनसेफ प्लेसमा खेल्नु हुँदैन। तर छतमा खेल्न हुन्छ तर केयरफुल्ली खेल्नुपर्छ । भरयाङमा खेल्नु हुँदैन। भरयाङमा डिसिपिलिनले हिंड्नुपर्छ । राम्ररी हिंड्नुपर्छ । भरयाङबाट लड्यो भने घाउ चोट लाग्छ । कहिलेकाहीं टाउको पनि फुट्न सक्छ । भान्छाको ग्याँस चुलो चलाउनु हुँदैन । ग्याँसले हात वा मुख जलाइदिन सक्छ । ग्याँस चुलो ठूलाले चलाउने हो । सानाले छुनु पनि हुँदैन ।
बाथरुम जाँदा नि होस गर्नुपर्छ । बाथरुममा धेरै पानी हुन्छ । पानी छ कि भनेर हिंडेर हिंड्नुपर्छ नत्र चिप्लेर लडिन्छ । टाउको बुडुङग फुट्न सक्छ । हातखुट्टा पनि भाँचिन सक्छ । टाउको नफुटे पनि हातगोडा भाँचिन सक्छ ।
मलाई मेरो घर राम्रो लाग्छ । कस्तो राम्रो भनेरचाहिं कसरी एक्सप्लेन गर्नु ? मेरो घरको भित्तामा अलिअलि क्रास देखिएको छ । पेन्टिङ गर्नुपर्ने भएको छ । पेन्टिङ लकडाउन खुलेसी दशैंतिर गराउनुपर्छ । रङ लाउन पैसा म दिन्छु खुत्रुकेको । त्यसले पुग्छ होला । खुत्रुकेमा पैसा टन्नै भको छ । खुत्रुकेमा आज हजार रुपैया थपिएको छ । त्यहाँ भाँडा ठाउँ
प्रकाशित: २२ असार २०७७ १५:११ सोमबार